Daawo Sawirro: Sida Madaxweyne Saciid Deni iyo wafdigiisa galabta loogu soo dhaweeyay degmada Dangoroyo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Daawo Sawirro: Sida Madaxweyne Saciid Deni iyo wafdigiisa galabta loogu soo dhaweeyay...
Daawo Sawirro: Sida Madaxweyne Saciid Deni iyo wafdigiisa galabta loogu soo dhaweeyay degmada Dangoroyo
Nugaal (Halaqaran.coom) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo oo isugu jira labada Gole ee Dowladda, ayaa galabta lagu soo dhoweeyay degmada Dangoroyo ee Gobolka Nugaal.
Saciid Deni iyio wafdiga uu hoggaaminayo waxaa banaanka hore ee degmada Dangoroyo kusoo dhoweeyay masuuliyiin ka mid ah labada Gole ee Dowladda , Maamulka Degmada, Hogaanka Dhaqanka iyo boqolaal ka mid ah Bulshada kala duwan ee degmada Dangoroyo.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane, Siciid Cabdullaahi Deni oo fagaare kula hadlayey dadweynaha Dangoroyo, ayaa uga mahadeliyey soo dhoweynta, wuxuuna Madaxweynuhu sheegay in waxyaabihii ay dadka deegaanka hore uga codsadeen oo ay ka mid aheyd dhismaha Wadada Dangoroyo iyo Eyl, uu ku faraxsanyahay in dhowaan shaqadeedu bilowmayso, oo wafdi uu hogaaminayo Safiirka Shiinaha oo arrimahaasi u yimi uu asbuucan booqday Eyl.
Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku dhiirigeliyey dadka degmada Dangoroyo ka shaqeynta horumarka, Midnimada iyo Nabadgelyada guud ee Puntland.
labada Gole ee Dowladda